कमेन्टमा ॐ लेख्नुहोस तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुनेछ आज सम्म देख्नुभाको छैन होला यस्ता खतरनाक नाग – Khabar Art Nepal
कमेन्टमा ॐ लेख्नुहोस तपाईको मनोकांक्षा पुरा हुनेछ आज सम्म देख्नुभाको छैन होला यस्ता खतरनाक नाग
By Pasang Tamang	 On १६ बैशाख २०७६, सोमबार १६:४७
आज सम्म देख्नुभाको छैनहोला यस्ता खतरनाक सर्प (भिडियो सहित) मुटु दरोहुने मित्रहरुले मात्र हेर्नुहोला भिडियो अन्त्यमा छ ।।
यस्ता खतरानक सर्प साएद आज सम्म देख्नुभाको छैनहोला मुटु दरोहुने मित्रहरुले मात्र हेर्नुहोला!!यस्ता खतरानक सर्प साएद आज सम्म देख्नुभाको छैनहोला मुटु दरोहुने मित्रहरुले मात्र हेर्नुहोला!!यस्ता खतरानक सर्प साएद आज सम्म देख्नुभाको छैनहोला मुटु दरोहुने मित्रहरुले मात्र हेर्नुहोला।
काठमाडौ । नेपालीहरुको दोस्रो ठुलौ चाड तिहार ३ दिनमात्र बाकी रहदा तपाइहरुले तिहारको लागी चाहिने सबै सामग्रीहरु तयार पारिसक्नुभयो होला । त कसैले किन्ने तयारी गदै हुनुहुन्छहोला । जे होस तिहारको झिलिमिली सगै तपाइको मन समेत झिलिमिली भएको होला ।तर एक दिन काग तिहार ,कुकुर तिहार र त्यसपछि लक्ष्मी पूजा आउछ । यो दिन सबैले धनको देवी लक्ष्मीको पूजालाई विशेष महत्वका साथ गर्ने गरिन्छ । यसको मुख्य उदेश्य धन आर्जन गर्ने नै हो ।
त्यसैगरी दिपावलीको दिन घरवरीपरि सफा सुघर राख्ने तथा फोहोर राखेमा माता लक्ष्मी रुष्ट हुने र घर उनको वास नरहने हुँदा जीवनभर आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने जस्तो मान्यताहरु पनि रहेको छ । र यो दिन घरमा झैझगडा गर्नु नहुने र गरेमा नराम्रो हुने मान्यता पनि रहेको छ । त्यसैकारण जब तपाइले लक्ष्मी पूजा गर्नुहुन्छ त्यसपछि यी चिजहरु देख्नुभयो भने शुभ सङ्गकेत रहेको छ । जसको कारणले तपाइको तिहार सगै घर नै शुभ हुने मान्यता रहेको छ । ती हुन् । विरालो , उल्लु , छेपारो र छुचुन्द्रो हुन् ।सुरुवातमा छुचुन्द्राबाट , यदि यो घरमा आयो भने मार्नुहुन्न भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । यसलाई मारेमा घरबाट लक्षिन हट्ने समेत मान्यता रहेको छ । प्राय हरेकको घरमा दिनहुँ जसो छुचुन्द्रो देख्न सकिन्छ तर दिपावलीको दिन देखिनुले निकै शुभ संकेत दिने गर्छ । यस दिन दिपावली पश्चात छुचुन्द्रो देखिनुले घरमा लक्ष्मीको वास भईसक्यो र जीवनमा कहिलें आर्थिक संकट पर्नेछैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्न्छि । त्यसैले यो निकै शुभ रहेको छ ।
त्यस्तै हिन्दू धर्म अनुसार उल्लूलाई धनकी देवी लक्ष्मीको वहन भनेर चिनिने गरिन्छ । उल्लूमा रहेका धेरै रहस्यहरु अहिले पनि कुनै मानवले पत्ता लगाउन सकेका छैनन । दिपावलीको रात उल्लू देखिनु निकै शुभ मानिने गर्छ । यस दिन दिपावली पश्चात घर वरिपरि उल्लू देखिएमा आफ्नो घरमा लक्ष्मीको वास भईसक्यो भन्ने संकेत रहने गछ । यो पनि अर्को शुभ सङ्गकेत नै हो ।
त्यसैगरी अरुबेला बाटो काटेमा बिरालेलाइ नराम्रो मानेपनि दिपावलीको रात आफ्नो घर वरिपरि बिरालो देख्नु भएमा निकै शुभ रहने कुरा हिन्दू धर्ममा उल्लेख गरिएको छ । यदि दिनहुँ जसो आफ्नो घरमा बस्ने बिरालो त्यस दिन भागेको छ भने सम्झनुस घरमा लक्ष्मीको वास हुन सकेन । जुन घरमा लक्ष्मीको वास हुँदा त्यस घरमा हर समय आर्थिक संकटले घेर्ने गर्छ । यसले यो दिन बिरालोको पनि महत्व रहेको छ ।
त्यसैगरी दिपावलीको दिन छेपारो देख्नुको छुट्टै महत्व रहने गर्छ । यस दिन छेपारो देख्नु निकै शुभ मानिने गर्छ ।यदि घरमा दिपावली गरेपश्चात छेपारो देख्नुभएमा सम्झनुस घरमा लक्ष्मी माताको वास भईसकेको छ र जीवनमा कुनै पनि समय आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने छैन तर दिपावली साझमा हुने भएकाले यो चाही कमै मात्रामा देख्न सकिन्छ ।
रंगशाला निर्माणका लागि दुबईमा उठ्यो २२ लाख सहयोग
रोल्पामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको कार्यक्रमस्थल नजिकै बम विष्फोट